Momba anay - Molooco
Tongasoa eto MOLOOCO. Vao nahita ny lehibe indrindra magazay an-tserasera ho an'ny ankamaroan'ny zavatra ilainao. Tetezo ny tranonkalantsika ary araho ny haino aman-jery sosialy ho an'ny fotoana fihenambidy lehibe. Izahay dia mitahiry foana ny vokatra hanatsarana ny fiainanao.
MOLOOCO dia orinasa miantsena an-tserasera 8 taona manompo olona amin'ny vokatra indostrialy isan-karazany. MOLOOCO dia orinasa mahaleo tena tanteraka ka ny tsy fivadihanay dia an'ny mpanjifanay ihany, manao izay fara herinay izahay hanompoana tanteraka ny mpanjifanay, mino izahay fa tena ilaina ny fifampitokisana.
Aza misalasala mifandray amin'ny MOLOOCO amin'ny fotoana rehetra! Tianay ianao ary misaotra anao amin'ny maha anisan'ny MOLOOCO!